Ukuhweba ngendlela ephuma phambili Yokukhetha i-IQ
Qalisa ngokuRhweba ngoKhetho lwe-IQ Kanye Ngoku
Elinye lamaqonga akhokela phambili kurhwebo ngeintanethi ehlabathini. Linganisela ithuba lakho lokurhweba ngezixhobo ezininzi ezohlukeneyo, usebenzisa ezona zixhobo ziphambili kunye nezixhobo zokuhlaluty' urhwebo. Joyina namhlanje uze ufumane amava onwabisayo lula.
Izindlela ezingaphezu kuka-10 zokukhokha
Kungani Ukukhetha IQ Option?
Ii-CFDs zizixhobo ezintsonkothileyo kwaye zithwele umngcipheko omkhulu wokuphulukana nemali ngephanyazo ngenxa yengeniso. Ii-akhawunti zabatyalimali beevenkile eziphakathi 87% aphulukana nemali xa erhweba ii-CFDs. Kufuneka uyinike ingqalelo into yokokuba ingaba uyaziqonda okanye hayi indlela ezisebenza ngayo ii-CFDs nokuba ingaba unakho okanye ukuzibeka kumngcipheko wokuphulukana nemali yakho.